Ra’isalwasaaraha Erdogan oo ka hadlaya xafladda furitaanka Marmaray (Video) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFarriin ka timid Ra'iisul Wasaare Erdogan oo ka hadlay xafladdii furitaanka Marmaray (Video)
29 / 10 / 2013 34 Istanbul, GUUD, VIDEO
Farriimaha ka socda Raiisel wasaare Erdogan ee ka hadlaya xafladda furitaanka Marmaray: Waa kuwan farriimaha Raiisel wasaare Recep Tayyip Erdoğan ee ka hadlaya xafladda furitaanka mashruuca Marmaray…
Erdoğan: itle Waxaan sida ugu dhakhsaha badan ugu soo qaadan doonnaa walaalkiis Marmaray annaga oo marinka tuubbada aan ka dhisi doonno badda hoosteeda. Waxaan dhameystiri doonnaa buundada sedexaad, garoonka diyaaradaha iyo marinka goynta waxaana ku dari doonnaa kuwa cusub mashruucyadeena. Dhawr bilood gudahood waxaan keeni doonnaa Istanbul tareenka xawaaraha dheereeya. ”
Raiisel wasaare Erdo spokean ayaa ka hadlay xafladda furitaanka 'Mashruuca qarniga' Marmaray. Erdoğan wuxuu soo galay goobta ay ku taalo heesta gider halka uu aadayo 'üsküdar'. Khudbadiisa, Erdoğan wuxuu yiri “Wadada waa ilbaxnimo, wuxuuna cadeeyay inay rabeen inay furaan Marmaray bisha 29. Ok waligeen ma hilmaamayn howsha keentay in lagu dhawaaqo jamhuuriyadeena.” Erdoğan ayaa ku tilmaamay Marmaray "mashruuca gobolka 81, wuxuuna siiyay war ah in mashruuca tamarta nukliyeerka ee Sinop iyo marinnada tuubbada ay gawaaridu ku dhaafi doonaan lagu dhammayn doono 2015.
Halkan ka daawo muuqaalka khudbada Erdogan:
Ka hel IRL wanaagsan
Mudane Madaxweyne, marti sharafeed qaaliga ah, Madaxweynaha qaaliga ah ee Golaha, loo magacaabay raiisel wasaaraha Japan iyo Romania, maamulayaasha garsoorka qaaliga ah ee dalkeena, wasiirrada qaaliga ah ee dhexdeena ah, wasiirradayada qaaliga ah, safiirada, qaaliga sharafta leh, marti sharaf qaali ah, dabcan waxaan maanta ku nool nahay milkiilaha iyo maaddada koowaad ee kibirka weyn ee Istanbul, Waan idinku salaamay dareenkayga qalbigayga. Waxaan rajeynayaa Marmaray inay faa iido ugu jirto Istanbul, dalkeena iyo dhamaan bini aadamka.
“SULTAN II. WAXAAN KUGU SAMEEYAA CAAWIMADA ”
Tabaha ayaa ah in la dhiso magaalo; Guul wadnaha waa addeecida ”ayuu yiri halyeeyga magaaladan. Laga soo bilaabo isla markii uu galay magaalada 1453, wuxuu ka shaqeeyay dib-u-dhiska magaalada Istanbul sida uu ku sheegay Aayaadkiisa wuxuuna nooga tegey waajibaadka ah in dadku qalbi jabiyaan. Suldaan Mehmed naxariistii labaad.
"Waxaan si gaar ah u dooneynay inaan furno 29 OCTOBER"
Waxaan furaynaa mashruuca qarnigii Marmaray maalin macno leh. Haa, maanta waxaan u dabaaldegaynaa sannad-guuradii 90 ee aasaaska jamhuuriyadeena, waxaan la kulannaa xamaasad gudaha iyo dibadaba. Waxaan rabnay inaan furno Marmaray gaar ahaan 29 October.
Walaalkan wuxuu ku dhashay magaaladan, wuxuu ku koray magaaladan, wuxuu hadda ku nool yahay degmada Üsküdar. Maanta waxaan ku nool nahay kibirka kibirka Turkey. Laakiin kibirka aan maanta ku nool nahay waa kibirka midnimadeena iyo walaalnimadeena. 10 ee jamhuuriyadeena. Sannad-guuradii ayuu ku faani jiray shabagyadiisa birta. 10. Aniga oo ku darin kuwa cusub waxtarka sanadka, waxaan ku qanacsanahay isla weynaan isla sanadka 90 annaga oo kordhinay shabakadaha birta, wadooyinka iyo shabakadaha badda.
IK Waligeed ma hilmaamayn geedi socodka keenaya ku dhawaaqida Republic of INA
Weligeey ma hilmaamnay geedi socodka keenaya ku dhawaaqida jamhuuriyadeena. Waligeey ma hilmaamayn sida ay u adag tahay. Gazi Mustafa Kemal wuxuu la halgamaa hirarka caanka ah ee madowga ah ee badda madow isagoo wata markab jabsanaya si uu u gaadho Samsun kana yimid Istanbul wuxuuna gaadhay Samsun. Waxaan ku gaadhnay Dagaalkeenna Madax-bannaanida rasaasta lagu qaado gaadhiga. Waxaan u qorney axaadiro. Ilaahay ha u naxariisto Shuhadadeena.
WAA WAAYEELU WAA MUXAADARO ”
Waxaan soo aragnay in wadadu tahay ilbaxnimo, madaxbanaanid iyo horumar. Taariikhda Jamhuuriyadda 6 kun oo 100 km waddo ah ayaa la sameeyay, 11 sanadkiiba 17 kun oo kiiloomitir ayaa ku dartay wadada. Waqtiyo badan ayaan ku kordhinay maalgashiga. Wadooyinka aan dhisnay, waxaan ku soo marnay magaalooyin ma ahan oo keliya laakiin sidoo kale qalbiyada. Waxaan ku soo dhaweynay waqooyiga iyo koonfurta iyo bari iyo galbeedka khadad tareen xawaare sare leh iyo diyaarado.
Madaarka 26. Maanta waxaan dhaafnay garoonka diyaaradaha ee 50. Maanaan gaarin heer aan sare ugu qaadno Jamhuuriyadeenna shabakadaha gaadiidka oo keliya. Isla mar ahaantaana, waxaan ku gaadhnay qaab aad u xoog badan adoo adeegsanaya isku-xidhka xiisaha leh shabakadaha midnimada walaalnimada iyo shabakadaha midnimada iyo shabakadaha dimuqraadiyadda sinnaanta ee sinnaanta.
Marmaray kaliya kuma xidho laba qaaradood, 150 waxay isu keenaysaa riyooyinkii sanadka si dhab ah. Marmaray waxay ummadaan u horseedaa aaminaad leh aaminaad inay arki karaan waxay samayn doonaan markay rumaystaan.
“81 PROVINCE PROJECT”
Taasi waa sababta aan u leeyahay Marmaray kaliya ma ahan mashruuc Istanbul. Sidoo kale waa mashruuc bini aadamnimo. Marmaray waa mashruuca gobolka 81 iyo sidoo kale Istanbul. Abe waxa uu yidhi wax fiican uun. Ku biiritaanka Istanbul oo uu ku biirayo Japan. Waxaan rajeynayaa Tokyo, Beijing, London, Uskudar. Hagaag, ok? Sure.
"Waxaan qaadaynaa talaabo loogu tala galay mashruuca NUCLEAR ENERGY project in SINOP"
Marmaray waa mashruuca dhamaan asxaabteena ka socota Beijing ilaa London. Hadda waxaan qaadaynaa talaabo kale oo aan la qaadno Japan. Tallaabada in sidoo kale wada rajeynayaa inaan dhisi doonaa mashruuca tamarta nukliyarka Sinop, Turkey, France iyo Japan.
Tareenadan ayaa ka gudbi doona badda hoosteeda. Rakaabku waxay qaadi doonaan jacayl iyo waliba jacayl iyo walaaltinimo udhaxeysa qaaradaha.
TÜ TUBE PASSES WAA IN CARSASKA AYUU FASALI DOONAAN '2015'
Waad ogtahay inaysan halkaas ku joogsanayn. Waxaan rajeynayaa inaan sidoo kale dhameynno marinnada tuubbooyinka 2015 halkaasoo gawaaridu ku dhaafi doonaan. Waxaan rajeyneynaa in gawaarida ay mari doonaan tuneelkaas. Isla sanadkaas, waxaan dhammeyneynaa buundada saddexaad. 76 milyan oo quduusiin ah oo ka mid ah quruuntayda iyo sidoo kale asxaabteyda iyo walaalnimada dhammaan qowmiyadaha dunidu way ogyihiin inaan rabno inaan ogaano inaan ku dhisney Marmaray walaaltinimada nabadda ee ku habboon taariikhdeena. Haddii uu ina jecel yahay iyo in kale, isagu wuu noo codayn karaa ama yaanu noo dooran. Walaal kasta ha ku faano maalgashikan weyn. Waxaan nahay asaasida mashruucan weyn. Laakiin waa inaad ogaataa in qof walba uu saami ku leeyahay sawirkan laga soo bilaabo 150 oo ku riyooday sannado ka hor isla muddadan isla magaaladan maanta. Marmaray waa shaqo innaga dhammaanteen ah. Waa shaqada dalkeena. Waxaan had iyo jeer wax dhahnaa. Annagu ma nihin sayidyada umaddan, annaguna waxaannu nahay addoommo umaddan.
Waxaan u soo qaadan doonaa walaalo MARMARAY "
Waxaan walaal u keeni doonaa Marmaray sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah marinka tuubbada aan ka dhisi doonno badda hoosteeda. Waxaan dhameystiri doonnaa buundada sedexaad, garoonka diyaaradaha iyo marinka goynta waxaana ku dari doonnaa kuwa cusub mashruucyadeena. Bilo gudahood, waxaan ku soo qaadan doonaa Istanbul tareenka xawaaraha dheereeya.
Marmaray waad ogtahay in hunguriga aad ku aragto jihada ka soo horjeedda iyo mitirka 62 mitirka laba tune uu yahay qaab isku xira qaaradaha iyo tunbarka tuubada.
Mashruuca qarniga, oo si weyn loogu lafa-guray dhismaha Marmaray, wuxuu ahaa shaqo farshaxan oo taariikhdu ku qori doonto xarfaha dahabiga ah markay tahay mashruuc gaadiid.
X WAQTI KA DAMBEEYSA LABAAD QAYBTA 4 WUXUU KA SAMEEYAA ”
Waxaan u maleynay inaanaan faragalin wadooyinka haajirida ee kaluunka. Waan ka hortagnay inay soo afjarto waqtigii aan dejinnay, laakiin waxaan ku darnay farshaxanno taariikhi ah taariikhda ilbaxnimada adduunka. Laga bilaabo maanta waxaan yareynaynaa waqtiga udhaxeeya labada qaarad ilaa daqiiqadaha 4.
Waxaan hayaa wax aan ka dhaho halkan. Intii lagu gudajiray dhismahan, farshaxan yaqaanku wuxuu ka xanaaqay dhamaan deggeneyaasha. Halkan ayaanu ku sababay raaxo darro. Waxaan ku iri walaalahayga reer countrysküdar, samee xalaashaada xalaal. Dhalasho kasta oo faraxsan waa xanuun badan yahay. Oo waxay ahayd dhalasho faraxsan. Waxaan leeyahay ilaahay ha naga barakeeyo shilka.
Kocaoglu Farriimaha Faransiiska
Ra'iisul Wasaare Erdogan: Ujeedadayadu waa inaan ku tababarno Marmaray 29 Oktoobar
Ra'iisul Wasaaraha Erdogan ayaa qorsheynaya in uu dhiso xarumo fiilo ah Baba Ocagi Guneysu
Ku-xigeenka Kutluata wuxuu farriin muhiim ah siiyey farqiga tareenka iyo TÜVASAŞ
Ra'iisul-wasaare Erdogan wuxuu nidaamka tareennada u diraa Antalya
Ra'iisul Wasaare Erdogan
Ma garanayo Marmaray
Madaxweynihii hore ee Soomaaaliya ee Mucaaradka Marmaray, Madaxweynaha ayaa ahaa Madaxweyne Cabdullaahi Geel (Video)
Waxa uu sidoo kale ka hadlay Marmaraydan sidoo kale